दण्ड रहित विद्यालय : व्यवहारमा छैन, नारामा सीमित !
सरकारले बालमैत्रीका नाममा धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ । टोल, वडा, विद्यालय हुँदै पुरै गाउँ तथा नगर नै बालमैत्री भयो भनेर गाजाबाजा सहित घोषणा गर्दै र यस्ता कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री आफै प्रमुख अतिथिका रु...
पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने विषयबस्तु पढ्ने विद्यार्थी आज कृषि क्षेत्रमा संलग्न छैनन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकासको लागि कृषि शिक्षामा प्रशिक्षित दक्ष जनशक्ति उत्पाद...
घरमा पनि समस्या, कक्षामा पनि समस्या !
वर्तमान युग प्रविधिको युग हो । मान्छे प्रविधिको प्रयोग विना जिउन नसक्ने भएको छ । मोबाइल फोन, इण्टरनेट सेवा मानिसको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । मोवाइल फोन विनाको मान्छे भेट्न मुस्किल छ । केटाकेटीदेखि वृद्ध...
भर्चुअल सिकाइ : 'पेडागोजी'मा आएको रुपान्तरण र चुनौती
सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम नै भर्चुअल सिकाइ हो । वेभको प्लेटफर्म भर्चुअल कक्षा हो । यस्तो सिकाइ विद्युतीय सिकाइ हो । यो अनलाइनमा आधारित सिकाइ हो । प्रवविधि मैत्री सिकाइ हो । सूचना र...
सिकाइ कहाँ कमजोर भयो ? सिकाइ सुधारका लागि कसको कहाँ कमजोरी भयो ? शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाविद्, शिक्षासँग सम्वद्ध निकाय, शिक्षाका सरोकारवाला, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली आदि ! शि...
शिक्षकको सृजना : सुधारको सन्देश
गत माघ ६ गते बिहान, घरमै बसेर पत्रपत्रिका पढ्दै थिएँ, छिमेकी होमनाथ ढुङ्गेल आउनु भयो । माघको चिसो बिहान विना काम त पक्कै आउनु भएन ! सामाजिक काममा संलग्न हुन रुचाउने ढुङ्गेलजीका आफ्नै विशेषता...
निर्णायक व्यक्तिको ध्यान निजी विद्यालय, स्वाङ भने सामुदायिक सुधारको !
नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा प्रदायक संस्थाका रुपमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुुई प्रकारका विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । शिक्षा ऐन २०२८ ( नवौं संशोधन २०७४ ) को दफा २ मा उल्लेखित परिभाषा अ...
सिकाइ उपलब्धि मापनमा नाम मात्रको पद्दति !
विद्यालय तहमा विद्यार्थी मूल्यांकन आलोचित छ । मूल्यांकन प्रक्रिया अहिले आएर मात्र विवादित बनेको भने होइन । विगतमा पनि विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंग मानिएको मूल्यांकन प्रणालीमा बारम्वार प्रश्न उठेकै हो...
- सुरज लम्साल / पेशाले शिक्षक हुन् । उनी शिक्षाका समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मात्रै हैन, आफ्ना भावनालाई सृजनात्मक शिल्पमा उतार्ने पनि गर्छन् । यस पटक उनले एक जना शिक्षकको मनका भावनालाई कविताका रुपमा उ...
के समावेश गर्ने पाठ्यक्रममा ?
विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा सय पूर्णाड्ढको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पढाईने छ भन्ने व्यबस्था छ । हालसम्म केन्...
नीति राज्य सञ्चालनका आधार हुन् । हुनत नीति कुनै कार्यको मार्ग दर्शन हो । यसले समाजको हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्य गर्छ, साथै नीति भविष्य निर्मााण गर्ने संयन्त्र पनि हो । नीति निर्माण गर्दा स...
नेपालको संविधान, विश्वका अभ्यास र शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका अपेक्षा
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यसँग सम्वन्धित धाराहरुले भरिएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका हामी नागरिकहरुमा भने समस्य...
विधेयकका बलिया र कमजोर पक्ष
देशको व्यवस्था र संरचना बदलिएको यतिका समय वितिसक्यो, संघीयता अनुकुलका शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्न शिक्षा मन्त्रालय निकै ढिलो भईसकेको छ । यो ढिलाईका कारण अहिले परेका र भविष्यमा पर्ने उल्झन्का बारेमा...
एकै संस्थामा गोलमटोल बनाएर सञ्चालन गर्दा दुवै शिक्षा कमजोर
शिक्षा ज्ञान मात्रै हो की सीप र ज्ञानको समिश्रण पनि ! यो सन्दर्भ देख्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसको मिहिन तरिकाले उत्तर नखोज्दा सम्म हामी ठिक ठाउँमा पुग्न कठिन छ । किन भने समयसँगै परिभाषा बदलिदैं जाने...
नारीतो विश्विविद्यालय जापानमा विभिन्न देशवाट शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षाकर्मी वा शिक्षकहरुको तालिम सञ्चालन हुने गर्दछ । सोही अवसरमा हाल उक्त विश्विविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा पपुवा न्युगिनिका...